War-murtiyeed laga soo saaray kulankii dowlad goboleedyada Soomaaliyeed (SAWIRRO)
Sagal Radio Services • News Report • February 6, 2015
Jimco, Feberaayo 06, 2015 (HOL) — Kulammadii wadatashi ahaa ee Muqdisho ku dhex-maray madaxweynaha Somalia iyo madaxda maamullada Puntland, Jubbaland iyo Koofur-Galbeed ayaa laga soo saaray war-murtiyeed wadajir ah.
Hogaamiyaha maamulka KMG ee Jubba Axmed Madoobe oo soo gaaray Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • September 7, 2013
Wafdi uu hogaaminayo Hogaamiyaha Maamulka KMG ee Jubba Sheekh Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa goor dhow ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliya oo si kulul u cambaareeyay Qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku dhinteen dad ka badan 10-ruux, halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad labaatan kale
In kabadan 15 Qof oo ku dhimatay qarax ismiidaan ah oo Muqdisho ka dhacay
Sagal Radio Services • News Feature • September 7, 2013
Faah faahin ayaa ka soo baxaya qaraxyo maanta ka dhacay nawaaxiga Gurigii Hooyooyinka oo ku taal Maqaayada The Village, iyadoo qasaara fara badan uu ka dhashay qaraxa oo mid ka mid ah uu ahaa ruux isa soo miidaamiyay.
Gabdho Soomaali ah oo ku dhaawacmay qarax Qaahira lagula eegtay Wasiirka arrimaha gudaha Masar
Sagal Radio Services • News Report • September 6, 2013
Wararka ka imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa sheegay in labo haween Soomaali ah ay ku dhaawacmeen qarax shalay lala eegtay Wasiirka Arrimaha Gudaha Masar Maxamed Ibraahim.
Dowlada Mareykanka oo Ruushka ku eedeysay in qatar uu gelinayo calaamka, kadib Khilaafkii Suuriya
Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Ruushka inuu Caalamka oo dhan uu afduub ku heysto, kadib markii labada dal ay isku khilaafeen arrinta Suuriya ee ku aadan fara gelinta milateri iyo Hubkii kiimikada lagu eedeeyay in Suuriya adeegsatay.
Dowlada Soomaaliya "Baaritaan dheer kadib waxaan beenineynaa warbixintii Qaramada Midoobay ee Soomaliya"
Baaritaan Caalami ah kadib waxaan beenineynaa eedaymihii aan raadka lahayn ee warbixintii Qaramada Midoobay
Dowlada Mareykanka oo sheegtay inay ku raad joogto Abuu Mansuur Al Imriiki
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay wali ku raad-joogto Cumar Shafiq Hamaami oo loo yaqaano Abuu mansuur Al-Amriiki, kaasoo maalmo ka hor ku dhawaaqay inuu ka baxay Al-Shabaab iyo Al-Qaacida.
Guddiga Arrimaha Dibadda ee Odayaasha Maraykanka oo ogolaaday Weerar lagu qaado dalka Suuriya
Sagal Radio Services • News Report • September 5, 2013
Mareykanka oo bilaabaya weearo ka dhan ah maamulka Bishaar Al Asad ee Suuriya
Kenya oo ku dhawaaqday inay ka baxeyso Maxkamada ICC iyo Barlamaanka oo kulan xasaasi ah leh
Baarlamaanka dalka Kenya ayaa maanta kulan deg deg ah ka yeelanaya qaraar ku saabsan sidii Kenya ay uga bixi laheyd xubinimada Maxkamada dambiyada dagaalka ee ICC.
Wararkii ugu dambeeyay qaraxyo badan oo xalay ka dhacay Muqdisho
Faah faahin ayaa ka soo baxaya qaraxyo culus oo xalay gil gilay qeybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho, iyadoo qaraxyada oo ahaa kuwo abaabulnaa isku waqti lagu soo beegay.
Shiikh Axmed Madoobe Oo Ku Wajahan Magaalada Muqdisho
Hogaamiyaha Maamulka KMG ah ee Jubba Axmed Madoobe ayaa lagu wadaa inuu maalmaha soo socda uu soo gaaro magaalada Muqdisho,
Nabadoon caan ka ahaa gobollada Bay iyo Bakool oo xalay lagu dilay Baydhabo
Sagal Radio Services • News Report • September 4, 2013
Rag hubeysan ayaa xalay magaalada Baydhabo ku dilay Nabadoon caan ahaa, iyadoo ciidamada ammaanka ay magaalada ka wadaan howl gallo ballaran.
Xisbiyada Mareykanka oo isku raacay in tilaabo adag laga qaado maamulka Siiriya
Xisbiyada Dimuquraadiga iyo Jamhuuriga ee Mareykanka ayaa meel isla dhigay heshiis siyaasadeed oo ku aadan in dowlada Maraykanka ay tilaabo militari ka qaado dowlada Siiriya.
Madaxweynaha Soomaaliya oo markii ugu horreysay safar dhulka ah ku tagay Marka
Sagal Radio Services • News Report • September 3, 2013
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka markii u horeysay safar dhulka ah ku gaaray magaalada Marka ee Gobolka Shabellaha Hoose
Markab dagaal oo kusoo dhawaaday Xeebaha Hobyo iyo dadka degaanka oo cabsanaya
Maraakiibta dagaal ee ciidamada NATO ee la dagaalanka burcad badeedka ayaa ku soo dhowaaday xeebaha degmada Hobyo ee Gobolka Mudug iyadoo degaanadaas cabsi laga dareemayo
Taageerayaasha Mursi oo ku baaqay dibad-baxyo kale oo abaabulan
Isbaheysi taageera Madaxweynihii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi ayaa maanta ku baaqay isu soo baxyo ballaaran oo ka dhan ah dowlada KMG ee Masar
Al Shabaab oo gowracday mid ka mid ah gudoomiyaasha degaanada hoostaga Afmadow
Wararka ka imaanaya degmada Afmadow ayaa sheegaya in Xoogag ka tirsan Al-Shabaab ku gowraceen Gudoomiye deegaan oo hoos taga degmadaas, kadib markii ay kaxaysteen.
Madaxweyne Xasan Sheekh "Doorasho waa inay dalka ka dhacdaa sanadka 2016 ma rabno muddo kororsi"
Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in dowladiisu ay ku hamineyso in doorasho ka dhacdo Soomaaliya sanado yar kadib
Al-Shabaab oo sheegay in Askar badan oo Itoobiyaan ku dileen dagaalo ka dhacay Bay iyo Bakool
Sagal Radio Services • News Report • September 2, 2013
Afhayeenka howl galada Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab ayaa faah faahin ka bixiyay dagaalo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolada Bay iyo Bakool, kaasoo ay la galeen ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya
Dowlada Soomaaliya oo heshiis la saxiixatay Bangiga Islaamka ee dalka Sacuudiga
Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda Federalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” oo ku sugan magaaladda Jidah ee Boqortooyadda Sucuudiga ayaa maanta waxaa uu heshiisyo la gaaray Bankiga Islaamka
Puntland oo qaadacday Shirweynaha Qaran ee ka furmay Muqdisho
Wasiiro ka tirsan Maamulka Puntland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garowe ayaa qaadacay shirweynaha qaran ee looga hadlayo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka, kaasoo maanta ka furmay magaalada Muqdisho
Shirweyne looga hadlayo Mustaqbalka Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Feature • September 2, 2013
Wafuud kakala socoto qeybaha dalka oo gaaray Muqdisho, si ay ugu qeyb qaataan shir ka furmay Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Shiikh oo ka warbixiyay wax-qabadka dowladiisa mudadii ay jirtay
Sagal Radio Services • News Feature • August 30, 2013
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay waxqabadka dowladdiisa mudadii sanadka aheyd, iyadoo 10-ka September ay ku beegan tahay sanad-guuradii koowaad markii la doortay
Ciidamada Nabad-sugidda oo howl gallo ay ka sameeyeen Bakaaraha Kusoo qabtay Ajaaniib
Sagal Radio Services • News Report • August 30, 2013
Howl gal qorsheysan ayaa xalay saqdii dhexe ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Hey'adda Nabadsugida qaranka ka fuliyeen Suuqa Bakaaraha, halkaasoo beryihii u dambeeyay dilal kala duwan ka dhacayeen.
Diyaarad weyn oo markii u horeysay muddo 20-sano soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Muqdisho
Diyaaradii weyn oo xamuul ah ayaa markii u horeysay muddo 20-sano ah soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho
Ra'iisul Wasaare Saacid oo kormeer ku tagay Bangiga Dhexe halkaas oo mushaar bixin ay ka socoto
Sagal Radio Services • News Report • August 29, 2013
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon oo tagay xarunta Bangiga dhexe, haalkaas oo qaar ka mid ah shaqaalaha Dowlada Mushaar laga siinayay
Wafdi qiimeynaya sidii ay ciidamo Qaramada Midoobay u geyn laheyd Soomaaliya oo Muqdisho gaaray iyo maadaxweynaha oo ka kulmay
Sagal Radio Services • News Feature • August 29, 2013
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Arbacadii shalay guddi ka socda Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika oo howshoodu tahay inay qiimeyn ku sameeyaan sidii ciidammo Qaramada Midoobey ka socda oo nabad illaalin ah loo keeni lahaa Soomaaliya.
Wakiilka Qaramada Midoobay oo soo dhaweeyay heshiiska dowlada iyo Maamulka Jubba
Madaxweyne Xasan Shiikh oo booqday Xarumaha ciidamada ee Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • August 28, 2013
Dowlada Soomaaliya ayaa dooneyso in dib u habeyn badan ay ku sameyso ciidamada dowlada
Dowlada Soomaaliya iyo Jubbaland oo heshiis ku kala saxiixday Adiss ababa
Dowladda Soomaaliya iyo Maamulkii Kismaayo ee horay loogu muransanaa ayaa goor dhow heshiis dhowr qodob ka kooban ku kala saxiixday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, kadib wada hadallo muddo todobaad ka badan qaatay
Itoobiya oo sheegtay in dowlada Soomaaliya Iyo Jubbaland ay heshiis ku gaareen Adiss Ababa
Shirkii toddobaadyadan uga socday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ergooyin ka kala socday dowladda Somalia iyo maamulka Jubbaland ayaa lagu gaaray heshiis buuxa
Xaaladda Suuriya oo cirka isku shareertay iyo Mareykanka oo jawaab kulul kabixinaya.
Wasiirka Gaashaandhiga oo sheegay in mushaarka loo kordhiyay ciidamada,iyo dagaallo u qorsheysan
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi ayaa shaaca ka qaaday in si rasmi ah ay u hirgeliyeen mushaar kordhin loo sameeyay ciidamada xooga dalka
Madaxweynaha Puntland oo u dhoofay Kenya iyo kulamo xasaasi oo uu Nairobi kula leeyahay......
Sagal Radio Services • News Report • August 26, 2013
Wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Faroole oo gaaray magaalada Nairobi
Madaxweyne Xasan oo kulamo gooni gooni ah la qaatay Wakiilada Maraykanka iyo Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya
Madaxweyne Xasan Shiikh oo Safiirka midowga Yurub iyo Kan Mareykanka arrimo muhiim ah kala hadlay
Saraakiil sare oo Qaramada Midoobay ah oo lagu rasaaseeyay Suuriya
Kooxo aan heybtooda la garan ayaa rasaas ku furay kolonyo ay la socdeen Khubaro ka tirsan qaramada Midoobey magaalada Dimishiq ee dalka Suuriya
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo gaaray Taleex iyo muran halkaas kajiro
Sagal Radio Services • News Feature • August 26, 2013
Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Puntland Cabdi Samad Cali Shire ayaa maanta gaaray degmada Taleex ee Gobolka Sool, halkaasoo ka mid ah deegaanada uu ka arimiyo Maamulka Khaatumo
Wasiirka Warfaafinta oo sheegay in sanadkan gudahiisa ay dib u howl gelinayaan Shirkadii diyaaradaha Somali Airline
Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay inay heshay illaa afar diyaaradood oo ay ku howl-gelineyso shirkadii diyaaradaha Soomaaliyeed ee Somali Airline, kaddib muddo 22-sano ah, taasoo ku tegi doonta dalalka caalamka duulimaadyo kala duwan.
Diyaarad ay lasocdeen Mas'uuliyiin ka tirsan dowlada iyo Ahlu-sunna oo shil ku sigatay iyo.......
Sagal Radio Services • News Report • August 25, 2013
Diyaarad ay la socdeen Gudoomiyaha Gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo, Abaanduulaha ciidamada xooga dalka Jen. C/risaaq Khaliif Cilmi iyo Mas'uuliyiin kale ayaa maanta ku sigatay inay shil ku gasho garoonka diyaaradaha degmada Guriceel.
Wasiirka gaashaandhiga oo ka qeyb galay aaska taliyihii guutada 2-aad oo Muqdisho......
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi, Wasiir kuxigeenkiisa, Taliyaha ciidamada xooga dalka iyo Saraakiil ayaa maanta ka qeyb galay aaska Taliyihii Guutada Labaad, kaasoo shalay ku geeriyooday Isbitaalka Xalane.
Dowlada Soomaaliya oo Shruudo kusoo rogtay shirkadaha diyaaradaha
Xukuumada Soomaaliya ayaa soo saartay shuruuc ku saabsan shirkadaha diyaaradaha ee dalka,
Wararkii ugu dambeeyay Wada-hadalii Adiss ababa oo bur-bur ku dhaw iyo dadaal ay wado Itoobiya
Sagal Radio Services • News Feature • August 25, 2013
Wada hadaladii u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Kismaayo ayaa bur bur qarka u saaran, iyadoo ergooyinka labada dhinac ee ka qeyb galaya wada hadalada ka socda Addis Ababa ay shalay ku kala tageen qodobo dhowr ah.
Qunsulka Soomaaliya ee dalka Yemen oo ka warbixiyay xaaladda Tabriibayaasha
Sagal Radio Services • News Report • August 24, 2013
Qunsulka dowlada Soomaaliya u fadhiya magaalada Caden ee dalka Yemen ayaa sheegtay in hoos u dhac xoog leh uu ku yimid tahriibka Soomaalida ay ku tagi jireen dalka Yemen.
Wasiirka gaashaandhiga iyo saraakiil ciidan oo safar dhulka ah ku tagay Shabeellaha Hoose
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo ay wehliyaan Xildhibaano iyo Saraakiil ayaa safar dhulka ah ku maraya qeybo ka mid ah Gobolka Shabellaha Hoose.
Qarax xalay ka dhacay meel ku dhaw guriga madaxweynaha Puntland ee Garowe
Wararka ka imaanaya magaalada Garowe ayaa sheegaya in qarax xoogan xalay ka dhacay Xaafada 1-da Agosto, meel ku dhow guriga Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole,
Afhayeenka AMISOM Col Cali"Ciidamada AMISOM ma kufsanin gabar Soomaaliyeed, waa been ee hala ogaado"
Afhayeenka Ciidamada AMISOM Col. Cali Aadan Xumad ayaa beeniyay eedeymaha ciidamada AMISOM loogu jeedinayo inay kufsi u geysteen Gabar Soomaaliyed
Askari ka tirsan dowlada Soomaaliya oo lagala baxay Xabsi kuyaalla Ceel- Waaq Kadibna la dilay
Sagal Radio Services • News Report • August 23, 2013
Wararka ka imaanaya degmada Ceelwaaq ayaa sheegaya in askari ka tirsanaa Milateriga shalay lagu dilay degmadaas, kadib markii lagala baxay Xabsi uu ku xirnaa.
AMISOM oo sheegtay in ay fashilisay weerar Al Shabaab ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha Kismayo
Ciidamada AMISOM ayaa sheegay inay ka hortageen weerar Al-Shabaab ku soo qaadeen xarun ciidan ay ku leeyihiin Garoonka diyaaradaha Kismaayo.
Kenya oo ka cabsi qabta in todobaadyada soo socda ay Al Shabaab weeararo ka geystaan Mombasa iyo xaaladda oo kacsan
Booliska dalka Kenya ayaa soo saaray digniin ku wajahan weeraro Al-Shabaab ka geystaan magaalada Mombasa oo ah magaalada labaad ee u weyn Kenya, halkaasoo ay ku nool yihiin Muslimiin fara badan.
Dowladda Sweden oo sheegtay in Malaayiin Doollar ku bixineysa Soomaaliya sanadaha2013—2017
Sagal Radio Services • News Feature • August 23, 2013
Dowlada Sweden oo xilligan usoo jeesatay xaaladda Soomaaliya Dhaqalaano badane ku bixineysa soo celinta Amniga.
Ra'iisul wasaare Saacid oo sheegay in lacago badan lagu abaal marin doono qofkii sheegaya dadka Wariyaasha dila
Sagal Radio Services • News Report • August 22, 2013
Dowlada Soomaaliya oo sheegtay in ku dadaaleyso ilaalinta xuquuqda Saxafiyiinta xilli aysan dowladu lahyn awood buuxda.
Madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe ayaa markii 7aad loo dhaariyay Xafiiska Madaxtinimada
Madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe ayaa markii 7aad loo dhaariyay xilka madaxtinimada dalkaas, kadib markii uu ku guuleystay doorashadii July.
Ninkii bixiyay sirtii Mareykanka ee uu faafiyay Wikileaks oo 35 sano oo xarig ah lagu xakumay
Bradley Manning oo kamid ahaa ciidamada Maraykanka ayaa ahaa ninkii shabakada internetka ee Wikileaks siiyey dokumentiyo badan oo sir u ah dowlada Maraykanka.
dagaallo ciidamada Amniga Kenya iyo kooxo hubeysan ku dhexmaray gudaha Kenya
Sagal Radio Services • News Feature • August 22, 2013
Iska-hor-imaad khasaare dhaliyay ayaa ka dhacay deegaan ku dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya kuna yaalla gudaha Kenya, iyadoo aan la ogeyn khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee dagaalkaas ka dhashay inta uu le’eg yahay.
Dowlada Bilgium oo Kenya ka taageereysa dib u soo celinta Qaxootiga Soomaaliyeed
Qaar ka mid ah wadamada Yurub oo bilaabay in Kenya aya ka taageeraan dib u celinta Qaxootiga Daleeda ku nool ee Somaaliyeed.
Dabley hubeysan oo Muqdisho ku dhaawacay Haweeney Ajnabi ah, iyagoo dilay labo ka mid ah Ilaaladeeda
Sagal Radio Services • News Report • August 21, 2013
Kooxo hubeysan ayaa degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ku dilay Wiil Turjumaan aha iyo Askari ka tirsan ciidamada dowlada Soomaaliya iyagoona dhaawac u geystay Haweney u dhalay dalka Sweden.
Al Shabaab badan oo la sheegay in lagu dilay xuduuda Kenya iyo Soomaaliya
Wararka ka imaanaya magaalada Xaduuda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay weerar qasaaro gaystay.
Barlamaanka Soomaaliya oo sanad jirsaday iyo gudoomiye Jawaari oo ka hadlay waxii u qabsoomay mudadii ay jireen
Sanad guuradii kowaad oo barlamaanka Soomaaliya u buuxsantahay iyo mudanayaasha oo siyaabo kala duwan ugu hadlay.
Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Ergada dowladda iyo Maamulka Kismaayo ee ku sugan Addis Ababa
Sagal Radio Services • News Feature • August 21, 2013
Gudoomiyaha barlamaanka Soomaaliya oo beeniyay in wax laga badalay Dastuurka dalka
Prof,Maxamed Shiikh Cisman Jawaari oo sheeko been abuur ah ku tilmaamay wararka shegaya in qaar ka mid ah qodobada Dastuurka isbadal lagu sameeyay.
Dowlada Turkiga oo gabogabeyneysa Wajigii 1aad ee gargaarka Soomaaliya Wajigii 2baadna dhawaan bilaabeysa
Sagal Radio Services • News Report • August 20, 2013
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay ka billaabayso Soomaaliya wajigii labaad ee howlaha samafalka ah ee ay ka waddo Soomaaliya, iyadoo sidoo kale sheegtay in wejigii koowaad uu soo gabagaboobey.
Al Shabaab oo hadal kulul katiri Rabshadaha kasocda dalka Masar
Xarakada Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ayaa markii u horeysay ka hadashay xiisadaha ka jira dalka Masar iyo rabshadihii dadka faraha badan ku dhinteen ee todobaadkii hore ka dhacay magaalada Qaahira.
Hogaamiyaha Ikhwaanul Muslimiin ee Masar oo laxeray iyo Madaxweynihii hore Xusni Mubaarak oo lasiideynayo
Hogaamiyihii Ururka Ikhwaanul Muslimiinka dalka Masar Mohammed Badie ayaa lagu xiray magaalada Qaahira iyo Madaxweynihii hore Xusni Mubaarak oo lasiideynayo
Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray Adiss Ababa wada-hadalna la yeelan doono Sh Axmed Madoobe
Sagal Radio Services • News Feature • August 20, 2013
Waafuud ka kala socoto dowlada Soomaaliya iyo Maamulka Axmed Madoobe oo wada-hadal ugu furmay dalka Itoobiya
Wafdi kasocda Qaramada Midoobay oo gaaray magaalada Jowhar
Shacabka ku nool Jowhar ayaa aad usoo dhaweeyay wafdi kasocda Qaramada Midoobay oo halkaas gaaray.
Maxkamad ku taala Mareykanka oo 15 sano oo xarig ah ku xukuntay hogaamiyihii Maafiyada daroogada Mexico
Mareykanka oo dadaal xoggan kubixinaya cirib tirka kooxaha ka ganacsada daroogada ee qatarta kuhaya dalkaasi
Gudoomiyaha barlaamka oo waraaq uu xilka ku weyn karo u qoray Xildhibaan Cali Khaliif Galeyr
Sagal Radio Services • News Report • August 19, 2013
Barlamaanka oo ugu baaqay Xildhibaan Cali khaliif Galeyr inuu cadeeymo u keeno eedeyntiisii aheyd in Madaxweyanha Soomaaliya Xasan Shiikh Iyo Al Shabaab oo xiriir dhaw ka leeyihiin arrimaha Jubooyinka
Dowlada Turkiga oo sheegtay in ay tababareyso ciidamada Soomaaliya
Dowlada Turkiga ayaa sheegatay inay tababarro u bilaabeyso ciidamada booliiska iyo kuwa Milateriga Soomaaliya.
Arrinta Shiikh Xasan Daahir oo wali lagu muransanyahay iyo heshiis ladoonayo in la saxiixo
Dowlada Soomaaliya oo dhawaan go'aan ka gaareysa arrinta hogaamiye Xasan Daahir Aweys
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya oo hadal kulul ka yiri kufsiga lagu eedeeyay ciidamada AMISOM ee Muqdisho
Qaramada Midoobay oo aad ugu walaacsan kufsiga ay Muqdisho ka geysteen ciidamada nabad ilaalinta AMISOM.
Banaanbax looga xunyahay in hey'adda MSF shaqadeededa Soomaaliya joojiso oo ka dhacay Jowhar
Sagal Radio Services • News Feature • August 19, 2013
Boqolaal Shacab ah oo ayaa banaanbax Jowhar ka dhacay kaga dalabaday hey'adda MSF inay dib u bilowdo shaqadii ay ka heysay Soomaaliya.
Al Shabaab oo askar ku dishay gudaha kenya
Sagal Radio Services • News Report • August 17, 2013
Afar ka tirsan booliska Kenya ayaa xalay saqdii dambe lagu dilay deegaan u dhow magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooy-bari Kenya.
Mo Farah oo wacdaro ka dhigay Moscow kuna guuleystay billadii labaad oo dahab ah
Orodyahanka caanka ah Mo Farah ayaa mar kale ku guuleystay biladii labaad oo dahab ah orodka 5-ta Kun ee Mitir ee Aduunka Tartanka ciyaaraha fudud ee Aduunka oo ka socda magaalada Moscow ee dalka Ruushka.
Daganaan la'aan xooggan oo ka jirta dalka Masar iyo cabsi laga qabo isku dhacyo horleh
Xaaladda guud ee dalka Masar ayaa kacsan, iyadoona laga cabsi qabo inay sii xoogeystaan iskahor-imaadyada u dhaxeeya taageerayaasha Maxamed Mursi iyo Ciidamada Milateriga.
Siminaar Nairobi loogu soo gabogabeeyay Haweenka barlamaanka Soomaaliya
Sagal Radio Services • First person • August 17, 2013
Waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo gabogabeeyay tababar muddo u soconayay xildhibaanada haweenka ee ku jira baralamaanka Soomaaliya.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee kunool Kenya oo bilaabay inay dib ugu soo laabtaan dalka
Kenya ayaa sheegtay in kumanaan qaxooti Soomaali ah oo ku noolaa dalkeeda ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan Soomaaliya
Kenya oo cadeysay in ciidamadeeda aysan kala bixi doonin Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • August 16, 2013
Dawlada federaalka ah ee Soomaaliya oo aaminsan in Kenya ay qayb ka tahay ismari-waaga ka taagan gobollada Jubbooyinka ayaa bilihii ugu dambeeyay dalbanaysay in ciidamada Kenya ee ku sugan gobolladaas ay ka baxaan dalka.
FIFA oo Muqdisho tababar ugu furtay Macalimiinta Kubadda Cagta
Xiriirka kubadda cagta aduunka FIFA oo sheegtay in ay usoojeesatay dhisidda ciyaaraha Soomaaliya
In kabadn 22 qof oo ku geeriyootay banaanbaxyo rabshada wata oo ka dhacay Masar
Dad badan oo lagu dilay magaalada Qaahira iyo xaaladda gobollada Masar oo allow Sahal ah
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Kenya oo bilaabay inay dalka ku laabtaan
Sagal Radio Services • News Feature • August 16, 2013
Xukuumadda Kenya ayaa shaacisay in 80,000 oo qoxooti Soomaaliyeed oo ku noolaa dalkeeda ay si iskood ah ugu laabteen Soomaaliya, iyadoo sheegtay inaan qoxootigaas si khasab ah looga bixin Kenya.
Somaliland:Nama quseyso heshiisyada dowlada Soomaaliya iyo shirkadaha Ajnabiga ah
Sagal Radio Services • News Report • August 14, 2013
Maamulka Somaliland ayaa ka soo horjeestay heshiis dowladda Soomaaliya la gashay shirkad fadhigeedu yahay Holland oo qaabilsan ammaanka badaha.
Hey'adda MSF oo joojisay howlihii gargaar ee ay kawaday Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Feature • August 14, 2013
Dhaqaatiirta aan xuduuda laheyn ee MSF ayaa ku dhawaaqay inay gebi ahaanba joojiyaan howlaha Sama fal ee ay ka wadaan Soomaaliya muddo 22-sano oo dagaalo sokeeye ay ka jireen.
Ra'iisul wasaare Saacid oo xalay kulan la qaatay qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidamada
Sagal Radio Services • News Report • August 13, 2013
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya , Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa xalay kulan la qaatay wasiirro, saraakiil ciidan iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, isagoo kala hadlay xaaladda ammaan ee dalka. Kulankan ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka, Cabdikariin Xuseen Guuleed isgoo ...
56 qof oo lagu dilay Masjid ku yaala wadanka Nigeria
Ugu yaraan 56 qof ayaa ku dhimatay weerar saladii subax lagu qaaday Masaajid ku yaal magaalada Konduga ee waqooyi bari dalkaasi Nigeria.
Wasiirka Arrimaha gudaha oo hseegay in dad ay kusoo qabteen howlagallo xalay Muqdisho ka dhacay
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in howl galo qorsheysan oo hey'adaha amniga ka sameeyeen maalmihii u dambeeyay ay ku soo qabteen unugyo ka tirsan Al-Shabaab.
Dowlada Soomaaliya oo beenisay eedeymo kasoo yeeray Siyaasiyiinta ku sugan Nairobi
Dowladda Soomaaliya ayaa si kulul uga jawaabay eedeymo maalmihii u dambeeyay ka soo yeerayay siyaasiyiin horay xilal uga soo qabtay dowladihii KMG ahaa, iyadoo ku tilmaamtay siyaasiyiin fashilmay.
Hogaamiyaasha Muslimiinta Kenya oo baaq culus ujeediyay dowlada Uganda
Sagal Radio Services • News Feature • August 13, 2013
Hogaanka Muslimiinta dalka Kenya, ayaa ugu baaqay dowlada Uganda inay siideyso Muslimiin Kenyaan ah oo ku xeran dalkaasi,kuwaas oo qarkood ay heysato dhibaatooyin nololeed oo baahsan, sida qaar ka mid ah qoysaskooda ay xaqiijyeen.
Taageerayaasha Ikhwaan Muslimiinka Masar oo Iskahorimaad isu diyaariyey
Sagal Radio Services • News Report • August 12, 2013
Cabsi xooggan oo ka jirto dalka Masar, xilli diyaar garow dagaal laga dareemayo gobollada dalkaasi
Al Shabaab oo shacabka Muqdisho ugu digtay saldhigyada ciidamada iyo xarumaha hey'adaha gargaarka
Al-Shabaab oo digniin culus ujeedisay shacabka magaalada Muqdisho xilli ay sheegeen in ay weeraro horleh ka geysan doonaan Caasimadda.
Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Geedi oo mucaaraday dowlada Federaalka
Sagal Radio Services • News Feature • August 12, 2013
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Prof. Cali Maxamed Geeddi ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay ku filnaan la'dahay ammaanka Caasimada Muqdisho, isagoo cadeeyay in Al-Shabaab habeenkii ay ka taliyaan.
Ra'iisul wasaare Saacid oo faafaahin ka bixiyay amaanka iyo waxqabadka xukuumadiisa
Sagal Radio Services • News Report • August 11, 2013
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa ka warbixiyay waxqabadka xukuumadiisa iyo ammaanka, isagoo ka dhawaajiyay in bilihii la soo dhaafay wax badan u qabsoomeen.
Booliis Kenyaan ah oo lagu eedeeyay inay dhaceen rakaab ku sugnaa garoonka diyaaradaha Nairobi
Todobo sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska Kenya, gaar ahaan kuwa ilaalada garoonka diyaaradaha Nairobi ee Jomo Kenyatta ayaa loo hesytaa eedeymo ah in dhac ay u geysteen rakaab ku sugnaa garoonka, xilligaas oo uu socday dab xoogan oo qabsaday garoonka.
dagaal culus oo Al Shabaab iyo dowlada ku dhexmaray degmada Ceelbarde
Sagal Radio Services • News Report • August 10, 2013
Ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa Xarakada Al Shabaab ayaa dagaal culus waxaa uu ku dhex-maray degmada Berdaale ee Gedo.
Maamulka Puntalnd oo dib ug uceliyay Muqdisho markab siday shixnad gargaar ah
Sagal Radio Services • August 10, 2013
War ka soo baxay maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in ay dib u celiyeen markab u siday cunto gargaar ah deegaano ka tirsan Puntland.
Maamulka Puntland oo dib u celiyay markab gargaar cunto u waday deganaada Puntland
Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in gogol nabeed uu ufidinayo shacabka Jubooyinka
Sagal Radio Services • News Report • August 9, 2013
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in beelaha ku dhaqan Jubooyinka ay gogol nabadeed ugu fidinayaan, isagoo ku baaqay in laga soo qeyb galo, cid banaanka laga saarayana aanay jirin.
Diyaarad Itoobiyaan ah oo hub siday oo garoonka diyaaradaha Muqdisho ku burburtay
Sagal Radio Services • News Feature • August 9, 2013
Diyaarad hub iyo saanado milateri u siday Ciidamada AMISOM ayaa saakay ku bur burtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kadib markii si qalad ah ay u soo caga dhigatay wadada Run Way-ga garoonka diyaaradaha.
Ra'iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon oo hambalyada ku aadan ciida u diray bulshada Soomaaliyeed
Sagal Radio Services • August 8, 2013
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa caawa Hamabalyo ku aadan ciidul Fidriga u diray shacabka Soomaaliyed meel walba ay joogaan, kadib war saxaafadeed ka soo baxay Xafiiskiisa.
Gudoomiyaha barlamaanka Soomaaliya oo hambalyada munaasabadda ciida u diray shacabka
Sagal Radio Services • News Report • August 8, 2013
Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa shacbiga Soomaaliyeed u diray Hambalyo ku aadan Munaasabadda Ciidul Fidriga.
Madaxda dowlada oo kumanaan dadweyne ah saaladda ciida kula dukaday masaajidka Isbaheysiga
Sagal Radio Services • News Feature • August 8, 2013
Madaxda ugu sareysa dalka ayaa maanta salaadii ciida boqolaal dadweyne kula dukaday Masaajidka Isbaheysiga, iyadoo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud khudbad uu ka jeediyay masaajidka ugu baaqay shacabka inay is cafiyaan.
Kulan looga hadlayay arrimaha Jubooyinka oo ka dhacay magaalada Nairobi
Sagal Radio Services • News Report • August 7, 2013
Waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka dhacay kulan ballaran oo looga hadlayay siyaasadda Jubooyinka iyo sidii qaab nabad ah ay ugu wada noolaan lahaayeen dadka degan gobollada Jubooyinka.
Banaanbax looga soo horjeedo Barclays Bank oo London ka dhacay
Sagal Radio Services • News Feature • August 7, 2013
Bannaanbax looga horjeedo go’aankii uu ku gaaray bankiga Barclays inuu joojiyo adeegyadii uu u qaban jiray xawaaladaha Soomaalida ayaa maanta ka dhacay magaalada London.
Al Shabaab oo weerar ku qaaday magaalada Baydhabo
Al Shabaab oo siiwada weeradada ka dhanka ah fariisamaha ciidmada dowlada Soomaaliya.
Kenya oo ku wareejinta dwolada Dekada iyo Air porka Kismaayo dhaliil ka keentay
Dowlada Kenya oo sheegtay in hadii ay ka baxdo Kimsaayo ay Al Shabaab dib u qabsan doonaan...
Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo sheegay in uu yahay musharax u tagaan xilka madaxtinimada Puntland
Sagal Radio Services • News Report • August 6, 2013
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr. C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan doorashada madaxtinimada Puntland ee dhici doonta bisha Janaayo ee sanadka 2014.Wareysi uu siiyay Idaacada VOA ayuu kaga hadlay xaalada Puntland, isagoo cadeeyay in mudada 15-ka sano ee ay jirto ...
Soomaaliya oo heshiis la gashay shirkad baarta shidaalka
Wasaaradda Kheyraadka dalka oo heshiis shidaal baaris ah la saxiixatay shirkad laga leeyahay Britain.
Dowlada Soomaaliya oo jawaab kulul ka bixisay go'aankii Puntland
Sagal Radio Services • News Feature • August 6, 2013
Xiirka ka dhaxeeya dowlada Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa sii xumaanayay billihii ugu dambeeyay kadib markii uu xafiiska dalka la wareegay madaxweyne Xasan Shiikh.
Wasiirada arrimaha dibadda Kenya oo diiday eedemaha loo jeedinayo ciidamada Kenya ee Kismaayo
Sagal Radio Services • News Report • August 5, 2013
Dowlada Kenya oo sheegtay in aysan wax dhibaato ah ka geysanin Kismaayo iyadoona ugu baaqday dowlada Federaalka in ay hanato taageerada Shacabkeeda.
Eedeysane loo heystay dilkii gudoomiyaha odayaasha gobolka Hiiraan oo dil lagu fuliay
Nin La sheegay in uu ka dambeeyay dilkii gudoomiyhii gobolka Hiiraan oo maanta lagu qisaayay Beledweyne
Mareykanka oo kordhiyay waqtiga ay xirnaanayaan Safaaradihiisa Bariga Dhexe iyo W/Afrika
Sagal Radio Services • News Feature • August 5, 2013
Mareykanka ayaa sheegay in tiro ka mid ah Safaaradihiisa ku yaal Waqooyiga Afrika iyo Bariga dhexe ay sii xirnaanayaan ilaa maalinta sabtida.
Shirar ay soo abaabushay dowlada federaalka oo lagu dhamaystirayo (Human Rights Road Map)
Shir lagu xoojinayo ilaalinta xuquuqda aadanaha oo ka dhacay caasimada Muqdisho iyo dowlada oo ka hadashay.
Madaxweynayaasha Ugunda iyo Soomaaliya oo kulan xasaasi ah Kampala ku yeeshay
Sagal Radio Services • News Report • August 4, 2013
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Uganda oo kulan gaar ah oo ay ku yesheen Kampala kaga wada hadlay arrimo xasaasi ah.
Eritrea oo ku dhawaaqday inay aqoonsantahay oo ay taageersantahay dowlada Soomaaliya
Dowladda Eritrea oo markii ugu horeysay aqoonsatay Soomaaliya kadib muddo dheer oo ay diidaneed madaxnaanida dalka.
Madaxweynaha Iraan oo ka hadlay Muqstaqbalka dambe Israa'iil
Sagal Radio Services • News Report • August 2, 2013
Maxamuud Axmed Najad madaxweynaha Iiraan oo sheegay in burbur ku dhawadahay Israa'iil
Soomaalida Kenya oo soo dhaweeyay inaan dib loo celinin Qaxootiga
Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay maxakmada Sare ee Kenya ku gaartay inaan dib loo celin karin Qaxootiga Soomalaiyed.
Dooni Ganacsi oo urarneyd dad Soomaaliyeed oo ku degtay xeebaha Yeman
Doon u rarneyd ganacsato Soomaali ah oo muddo seddex beri ah lagu la’aa badda ayaa waxaa la shaaciyey inay doonidaasi quustay.
Puntland oo sii deysay Badmaaxayaal Iraan u dhashay
Sagal Radio Services • News Feature • August 2, 2013
Maamulka Puntland ayaa sii daayay bad-maaxayaal u dhashay dalka Iiraan, kadib markii la qabtay, iyagoo si sharci daro ah uga kaluumeysanayay Xeebaha Puntland
Puntalnd oo ka digaysa weeraro degaanadeeda ay ka geystaan Al Shabaab
Sagal Radio Services • News Report • August 1, 2013
Putland oo cabsi xoogan ka qabta weeraro ay u geystaan Al Shabaab xalli ay ku beegantahay munaasabadda xilligii la aas-aasay.
Falastiin iyo Israa'iil oo 9 bilood heshiis kaga gaari doono khilaafka Bariga dhexe
Sagal Radio Services • News Report • July 31, 2013
Dowlada Mareykanka oo sheegtay inay dooneyso heshiis buuxa oo ay gaaran Falastiin iyo Israa'iil
Burcad badeed Soomaali ah oo xukun xabsi ay ar ku riday maxkamad ku taala Kenya
Burcad badeed Soomaali ah oo ay Kenya ku xakuntay xabsi kadib eedeymo afduub oo loo jeediyay.
Saraakiil Kenyaan ah oo u afduubnaa Al Shabaab oo lasii daayay
Sagal Radio Services • News Feature • July 31, 2013
Saraakiil shaqaale oo ka tirsanaa dowlada Kenya una afduubnaa Al Shabaab ayaa dib xoriyadoodii u helay, iyagoona dib ula midoobay qoyskooda.
Dowlada Federaalka oo heshiis la gashay shirkad ilaalisa xeebaha dalka
Dowlada Soomalaiya ayaa heshiis qodobo badan ka kooban oo ku aadan ilaalinta xeebaha dalka la gashay shirkad saldhigeedu yahay wadanka Holland.
Dowlada Itoobiya oo markale ku eedeysay Eritrea inay taageerto Al Shabaab
Sagal Radio Services • News Report • July 30, 2013
Dowladaha Itoobiya iyo Eritrea oo weerar afka ah isku qaaday kadib eedeymo laba dhinac ay isu jeediyeen.
Kenya oo dil ku xukuntay nin Caawiyey Burcad Badeedii afduubay Judith Tebbutt
Kenya oo xakun dil ah ku riday nin Muslim ah oo lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa afduubyo burcad ay dalkeeda ka geysteen.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga oo sheegay in aysan waxba ka badali doonin siyaasadooda Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Feature • July 30, 2013
Dowlada Turkiga oo ka mid ah dowladaha sida weyn u taageera Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan joojin doonin howlaha hormarineed ee ay ka wado Soomaaliya kadib qaraxii caasimadda lagula eegtay shaqaalahooda.
Amisom oo sheegtay in ay ilaalin doonto xarumaha ay daganyihiin ajnabiga Muqdisho joogo
Ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ayaa sheegay inay ilaalin doonaan xarumaha ay Muqdisho ka dagan yihiin hey'adaha shisheeye gaar ahaan kuwa Turkiga.
Madaxweyne Xasan Shiikh oo ugu baaqay xildhibaanada inay sii shaqeeyaan oo ay................
Sagal Radio Services • News Report • July 29, 2013
Hogaanka dalka ayaa ugu baaqay mudanayaasha barlamaanka inay sii shaqeeyaan waqti dheeraad,xiili lagu jiro fasaxooda.
Falastiin iyo Israa'iil oo wadahadal ugu furmay Mareykanka iyo rajo xummo ka taagan kulanka
Dadaal dheer kadib Mareykanka ayaa u muuqada mid ku guuleystay dib u bilaabidda wada hadalka Falastiin iyo Israa'iil oo colaad dheeraatay ay ka dhaxeyso.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada oo howl-gallo ballaaran ka wada Jowhar
Sagal Radio Services • News Feature • July 29, 2013
Ciidamada AMISOM oo kaashanaya kuwa dowlada ayaa sheegay in howlgal xooggan oo guri guri ah ay ka bilaabeen magaalada Jowhar. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in saaka Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda howl gal gur guri lagu baarayo ka wadaan xaafada Hantiwadaag, iyadoo uu hakad ku jiro dhaq ...
Dowlada oo sheegtay in labadalaayo maamulka Shabeellaha Hoose kadib dagaallo ka dhacay
Wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo hoosta ka xariiqday in si dhaqsi ah lagu badali doono gudomiyaha gobolka Shabeelaha Hosse.
Ra’iisul Wasaare Saacid oo booqday Xaruntii shaqaalaha Turkiga ee la weeraray
Sagal Radio Services • News Report • July 28, 2013
Dowlada Federaalka oo Turkiga ugu tacsiyeysay muwaadinintii ugu dhintay Muqdisho, kadib qarax ismiidaamin ah oo Al Shabaab ay ku qaadeen xarunta ay ku leeyihiin caasimadda dalka.
Magaalada Garowe oo lagu soo bandhigay xeerka cusub ee saxaafaada Puntland
Dowlad goboleedka Puntland ayaa awooda saareysa helidda sharci saxaafadeed oo lagu dhaqo Warbaahinta ka howl gasha maamulkaasi.
Golaha wasiirada oo ansixiyay miisaaniyada mushaar siinta ciidamada dowlada
Dowlada ayaa waxay xilliyadii dambe waday dar-dar gelinta qorshayaal muhiim u ah hormarka iyo dhaqan gelinta nidaamka dastuurka.
Maadxweynaha Soomaaliya oo baaq culus ujeediyay shacabka
Madaxweyne Xasan Shiikh oo ugu baaqay shacabka in ay la shaqeeyaan ciidamada amaanka.
Dagaalo xooggan oo xalay ka dhacay Beledweyne iyo Byadhabo
Sagal Radio Services • News Report • July 27, 2013
Al Shabaab oo xalay weeraro ku qaaday degaano ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Bay.........
Maxkamada ciidamada qalabka sida oo dil toogasho ah ku xukuntay afar askari
Sagal Radio Services • News Feature • July 27, 2013
Maxkamada ciidamada qalabka Soomaaliya oo xukun dil ah ku fulisay afar askari oo ka tirsan ciidamada dowlada
Gudoomiyaha Bangiga dhexe ee Soomaaliya oo sheegay in aysan jirin lacago la lunsaday
Sagal Radio Services • News Report • July 26, 2013
Guddoomiyaha Bangiga dhexe ee Soomalaiya ayaa markale beeniyay wararka isaga iyo dowlada laxiriirinaya in lacago aan sharci aheyn ay kala baxeen Bangiga.
Ciidamada amaanka Muqdisho oo heegan la geliyay iyo Al Shabaab oo hanjabay
Taliyaasha ciidamada caasimadda Muqdisho ayaa lagu wargeliyay in ay heegaan buuxa geliyaan ciidamada, si looga hortago weeraro ka yimaada Al shabaab.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Shabeellaha Hoose
Sagal Radio Services • News Feature • July 26, 2013
Wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dowlada Federaalka ayaa gaaray deeganadii dhawaan lagu dagaalamay ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Muwaadiniin Soomaali ah oo markale lagu dilay dalka Konfur Afrika
Sagal Radio Services • News Report • July 23, 2013
Dilalka iyo dhaca lagu hayo Soomaalida ku nool dalka South Afrika oo sii xoogeysaneysa.
Caruurta uu dhalay Maxamed Mursi oo eedeyn kulul u jeediyay Milatariga Masar
Hadalka Caruurta iyo Qoyska Maxamed Morsi ayaa soo baxaya xili ay sii xoogeysanayaan banaanbaxyada taageerayaasha Ikhawaan Muslimiinka iyo shacab kale ay ka dhigayaan magaalada Qaahira ee dalka Masar. Tan iyo intii inqilaabka Militari ka dhacay dalka Masar waxaan la ogeyn meesha lagu hayo Madaxweyne Morsi, wallow ay Militariga sheegeen inuu ...
Dowlada Soomaaliya oo ugu baaqday QM in ay sameyso guddi dhex dhexaad ka ah arrimaha Soomaaliya
Dowlada Federaalka Soomaaliya oo Qaramada Midoobay ugu baaqday in sameyso guddi dhex dhexaad ka ah arrimaha Soomaaliya kadib....................
Kulan looga hadlayay amaanka oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
NPR Interview • News Report • July 23, 2013
Kulan ballaaran oo looga hadlayay Ammaanka oo ay ka qeyb galeen Wasiiro, Maamulka Gobolka Banaadir, Dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta ka dhacay Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir.
Putland oo Garowe ku dishay labo nin oo ku eedeysan dilkii Sh.C/qaadir Gacamey
Sagal Radio Services • News Feature • July 23, 2013
Dowlada Putland oo wacad ku martay in ay sii wadi doonto beegsiga ay ku heyso shaqsiyaadka lala xiriiriyo Al shabaab.
Dowlada Australia oo dib u celinaysa qaxootiga tahriibka ku galaya dalkeeda
Sagal Radio Services • News Report • July 22, 2013
Dowlada Australia ayaa sheegtay Jimcihii in ay ka go'antahay dib u celinta qaxootiga dalkeeda kusoo gala qaabka tahriibka iyagoo ka tagaya qaarada Aasiya.
Qaramada Midoobay oo ku baaqday in deg deg loo gar-gaaro barakacayaasha Kismaayo
Qaramada Midoobay ayaa caalamka ugu baaqday in ay dhaqaalo u yaboohaan sidii gar-gaar bani'aadanimo loo gaarsiin lahaa dadkii ku barakacay dagaaladii ka dhacay Kismaayo.
Qaramada Midoobay oo sheegtay in Mareykanka ay dilal ka geystaan Kenya
Dowlada Mareykanka ayaa si weyn ula socota dhaq-dhaqaaqa shaqsiyaadka u dhashay Kenya ee sida dhaw u taageersan ama ula shaqeeyo Al Shabaab.
Shir looga hadlayo amniga Putland oo ka furmay Garowe
Shir saddax maalmood socon doono loogana hadlayo arrimaha amaanka maamulka Putland ayaa ka furmay magaalada Garowe.
Dowlada oo magacaawday taliyaha cusub ee nabad sugidda gobolka Banaadir
Sagal Radio Services • News Feature • July 22, 2013
Taliyaha Nabadsugida Gobolka Banaadir ayaa loo magacaabay Col. Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi), isagoo bedelaya Taliyihii hore Nabadsugida Gobolka Banaadir Khaliif Axmed Ereg oo xilkaas hayay mudadii ugu dheereyd.
Madaxweyne Xassan Shiikh Oo Hadal Kulul Ujeediyay Taliyaasha Ciidamada Dowlada
Sagal Radio Services • News Feature • July 21, 2013
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh oo la hadlayay saraakii iyo ciidammo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in sarkaalkii aan awood u lahayd inuu askariga uu xukumo uu ka celiyo isbaarada ay u furan tahay inuu shaqada isaga tago.
Xarakada Alshabaab oo dhoolatus milatari ku sameeyay degmada Baraawe
Sagal Radio Services • News Report • July 21, 2013
Ciidamo ku hubeysan gaadiidka dagaalka isla markaana afka u duubnaa ayaa ku soo bandhigay dhoolatus milatari degmada Baraawe ee gobolka Sh/hoose.
Sagal Radio Services • News Feature • July 19, 2013
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa caawa ku casuumay bahda warbaahinta kulan afur iyo xog-wareysi ah kaasoo qaatay muddo saddex saacadood ah.
Itoobiya oo ka hadashay ka bixitaanka ciidamadeeda ee Baydhabo
Sagal Radio Services • News Report • July 19, 2013
Dowladda Itoobiya ayaa ka hadashay ka bixitaanka ciidamadeeda magaalada Baydhabo, kadib markii ciidamada AMISOM ay ku wareejisay ammaanka magaalada iyo goobihii ay baneysay.
Dalka Kenya oo lagu qabtay munaasabadda 1da Luulyo
Inta badan magaalooyinka dalka Kenya oo ay Soomaalida ku nool yihiin ayaa si weyn looga xusay munaasabadda 1-da Luulyo iyadoo ay munaasabadii ugu weyneyd ka dhacday magaalada Nairobi.
Xassan Shiikh oo ciidamada AMISOM ugu baaqay in ay dhax-dhaxaad ka noqdaan dagaalka Kismaayo
Sagal Radio Services • News Report • June 29, 2013
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale maanta ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalada ka socda magaalada Kismaayo, xilli dhinacyada dagaalamaya aanay u dhaga nugleyn baaqyada loo jeedinayo.
Magacyada 48 maxbuus ee Maraykanka oo weli lagusii heyn doono Guwantanamo
Maraykanka ayaa todobaadkan shaaciyey magacyada 48 qof oo kamid ah maxaabiista xabsiga Guwantanamo kuwaasi oo uu Maraykanka diidan yahay in mustaqbalka lasii daayo.
Obama oo booqasho ku tagay dalka Jarmalka
Sagal Radio Services • News Report • June 19, 2013
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa safar ku maraya dalka Germany,si uu wada hadalo qotodheer ula yeesho Madaxda Jarmalka..
Ra'iisul wasaare Saacid oo sheegay in lala xisaabtami doono dadkii huriyay dagaallada Kismaayo
Sagal Radio Services • News Report • June 9, 2013
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa sheegay inaan la isaga hari doonin hurinta colaad ay ku dhintaan dad aan waxba galabsan in si macno-darro ah lagu daadiyo dhiigga shacabka Soomaaliyeed.
Sagal Radio Services • News Report • May 12, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • May 4, 2013
Ganacsatada Puntland ee shidaalka ka keeni jirey Yemen oo codsi u direy madaxda Puntland
Sagal Radio Services • News Report • February 27, 2013
Shir maanta ay isugu yimaadeen ganacsato dhawaan maamulka Puntland ka joojiyey keenidda shidaal ay ka keeni jireen dalka Yemen kaas oo loo yaqaanay shidaalka shushubka ah ayey madaxweynaha kaga codsadeen in dib loogu ogolaado keenidda shidaalkaasi.
Dibad-bax lagu taageerayay aqoonsiga Mareykanka ee DS oo Muqdisho ka dhacay
Sagal Radio Services • News Report • January 21, 2013
Dibadbaxan oo uu soo qaban qaabiyay Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka soo qeyb Galay Masuuliyiin katirsan labada gole ee dowladda oo uu horkacayay R/wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya C/Faarax Shirdoon Saacid gudoomiyaha gobolka Banaadir Iyo boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid 17-ka Dagmo ee gobolka Banaadir.
Dhageyso Warka Axadnimo ee Idaacadda Sagal
Sagal Radio Services • Audio/News Report • January 6, 2013
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland iyo xisbiyada oo kulmay
Sagal Radio Services • News Report • January 6, 2013
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka maamulka Puntland, ayaa magaalada Garroowe kula kulmay lixda urur siyaasadeed ee ka soo gudbay shuruudihii la hordhigay ee ay uga mid noqdeen xisbiyada siyaasadeed ee maamulka Puntland.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • January 5, 2013
Wasiirka horrumarinta adeegga bulshada oo la kulantay raysal wasaare ku xigeenka Turkiga
Wasiirka Wasaaradda Hormarinta iyo Adeegga Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Drso Maryan Qaasim oo socdaal shaqo ku joogta dalka aynu walaalaha nahay ee Turkiga ayaa kulammo kala duwan la qaadatay Ra’isulwasaare Kuxigeenka iyo Wasiirka Caafimaadka Dalkaasi Turkiga.
Dagaal xalay ka dhacay duleedka Boosaaso
Xoogagga Al-shabaab ee saldhiggoodu yahay buuraha Gollis ayaa xalay weerarro ku qaaday koontaroollo ku yaalla duleedka Koonfureed ee degmada Boosaaso, kuwaasoo dhaliyay khasaare kooban.
Dhageyso warka Sagal Radio iyo barnaamijkii dhacdooyinkii toddobaadkii tagay ee Soomaaliya
Sagal Radio Services • Audio • December 15, 2012
Dhageysatayaasheenna qaayaha mudanow, warka iyo barnaamijka dhacdooyinkii toddobaadkii tagay ee Soomaaliya waxa uu idin kaga imaanayaa xarrunta Radio Sagal ee magaalada Nayroobi.